China Factory Steel Guy Wire mandeha ho azy sy mpanamboatra | Waxun
Ny GUY-LINK dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny telefaona sy ny herinaratra elektrika hamarana ny tadiny na tehina eo an-tampon'ny andry sy eo amin'ny mason'ny vatofantsika. Ho an'ny Strand fampiatoana, Guy Strand ary Wire static. Nampiasaina hamaranana ny iraky ny helodrano mpanelanelana an'habakabaka, ary amin'ny tendrony ambony sy farany ambany ry zalahy ambany.
Fifandraisana haingana amin'ny tadin'ny vy
Strandlink tariby vy mandeha ho azy dia fitaovana mitazona mekanika ho an'ny tariby, kofehy ary tehina (Same Functional As Strandlink). Ny GUY-LINK dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny telefaona sy herinaratra elektrika hamarana ny tady na tehina eo an-tampon'ny andry sy eo amin'ny mason'ny vatofantsika. Ho an'ny Strand fampiatoana, Guy Strand ary Wire static. Nampiasaina hamaranana ny iraky ny helodrano mpanelanelana an'habakabaka, ary amin'ny tendrony ambony sy farany ambany ry zalahy ambany. All-Grades GUY-LINK dia ho an'ireo tadin-tariby 7 tariby sy tariby matevina fantatry ny marika anarana, fonosana, karazana vy ary ao anatin'ny elanelam-potoana voatanisa, fa tsy tadin-tariby 3 ary tsy Alumnoweld. Ampiasaina ampiasaina amin'ny zinc vita amin'ny zinc, Aluminized, ary Betalume. Fanamarihana: Azo ampiasaina amin'ny herinao rehetra amin'ny messenger an'ny strand bandy.
Rohy Strand mandeha ho azy (AB)
Azo ampiharina amin'ny tadin'ny vy (mm)
Azo ampiharina amin'ny tadin'ny vy (inch)
Naoty hitana farafahakeliny 90% amin'ny strand RBS ampiasaina
Ho an'ny fisarahana fampiharana amin'ny tariby bandy overhead na down.
Ny "Universal grade" dia asaina ampiasaina amin'ny Alumoweld, Aluminized, EHS ary Galvanized Steel.
Ny "Grades rehetra" dia atolotra hampiasaina amin'ny Kilasy iraisana, Siemens-Martin, kilasy fampiasana hery matanjaka, kofehy vy mifono vy ary Aluminized.
• Ho an'ny fisarahana fampiharana amin'ny tariby bandy ambony na ambany
• Ny "Universal grade" dia asaina ampiasaina amin'ny Alumoweld, Aluminized, EHS ary Galvanized Steel
• Ny "grady rehetra" dia atolotra hampiasaina amin'ny Kilasy iraisana, Siemens-Martin, naoty ambony azo ampiasaina amin'ny herinaratra, kofehy vy nandrisika sy vita amin'ny Aluminized
1. Hanamarinana ny tariby tariby azo ampiharina.
2. refesio ny elanelana amin'ny tariby misy kofehy avy eo amin'ny farany ka hatramin'ny Knurl, ary asio marika
3. Atsofohy mankany anaty ilay tariby kofehy mankamin'ny teboka izay nomarihinay
4. Araho ny dingana iray ihany miaraka amin'ny tariby kofehy iray hafa, alao antoka fa ny kofehin-kofehy dia mifatotra rehefa vita ny dingana rehetra.
Teo aloha: Guy Strand Vise
Manaraka: Fitaovana fantsona mangatsiaka mangatsiaka
HIRA FOTOTRA AUTOMATIKA
Strandlink tariby vy mandeha ho azy
Ny tsipika overhead splices